SAWIRO:-Qoysas Danyar ah Oo Deeq la gaarsiiyey | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta SAWIRO:-Qoysas Danyar ah Oo Deeq la gaarsiiyey
SAWIRO:-Qoysas Danyar ah Oo Deeq la gaarsiiyey
Maamulka Koonfur galbeed oo qorsheynayo inuu raashiin deeq ah gaarsiiyo degmooyinka go’doonsan ee Koonfur galbeed iyo raashiin loo qaybiyay reer Xudur.
Maamulka Koonfur galbeed ayaa qorsheynayo inuu gaarsiiyo raashiin deeq ah qaar ka mid ah degmooyinka go’doonsan ee Koonfur galbees.
Warbaahinta Dhega’ade Media Corporation ayaa ogaatay in wax ka badan 30 tan on raashiin ah uu qorsheynayo maamulka Koonfur galbeed inuu gaarsiiyo degmooyin ay ka mid yihiin Diinsoor, Qansaxdheere, Xudur iyo Waajid.
Deeqda raashiinka ah ayaa lagu wadaa inay dhowaan soo gaarto dekeda weyn ee magaalada Muqdisho ayada oo sidoo kalena ay dhowaan lagu wado in deeq uu madaxweynaha dowlada Koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ugu talagalay deegaanadaasi sidoo kale dhowaan ay gaarto.
Dhowaan ayaa waxaa baaqii madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen kasoo jawaabay ganacsato ay ka midyihiin milkiilaha Shirkada duulimaadyada Daruuro Maxamed Daruuro iyo maareeyaha garoonka diyaaradaha Shaatigaduud ahna ganacsade Salaad Maxamed Muqtaar, ayaga oo deeqo raashiin ah gaarsiiyay degmooyinka Xudur iyo Waajid.
Iskusoo wada duube, waxaa muuqato iskutashi ay sameynayaan ganacsatada iyo maanulka Koonfur galbeed si loogu gurmado dadyowga degmooyinka qaar ee gobolada Koonfur galbeed ee ay cuna yarida lasoo darastay kadib markii ay Alshabaab kusoo rogtay cunaqabateyn ganacsi.
Dhankq kale agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur galbeed mudane Cabdullaahi Cali Watiin ayaa raashiin deeq ah ugu qaybiyay magaalada Xudur maanta ilaa iyo 950 qoys oo u badan qoysas danyar ah si weyna ay u saameysay jidadka ay Alshabaab xirtay si aanay gaadiidka ganacsiga usoo gaarin Xudur.